トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Uyewo hapana hazvigoni akasungirirwa nemweya naye? Sei rinogona akasungirirwa?
Soul naye, nokuti chii mumwe vanokwezvwa nomweya, ndiyewo kazhinji kana akasangana kuti kuroorwa uye kukura sezvo iri ukama kana vasikana. Zvisinei, mweya naye hakusi muchato naye.
mupikisi wematambudziko kuti Meguria 'kakawanda yapfuura upenyu kunge pamberi kupfungwa muchato inovhurwa. Nokuda kwechikonzero ichi, mweya mudzimai anogonawo kunzi kwete kuroorana naye uye zvakaenzana.
Uyezve, kana mumwe chokuita ne ukama yakadzika, vamwe vanhu vachatitaka kuti regai chaiyo pamusoro fomu muchato. Zvinogonekawo kusangana mweya naye akanga chisingadzivisiki kuti mugumo wava mwoyo, kana kuti kuva kubva ipapo kusvika muchato Ndiyo kwamuri.
kana zvachose kuti uchida kuroorwa mweya naye, zvakakosha kuchengetedza vachisundira pfungwa zvakakodzera kuti chinangwa. In
kuti chokuita mweya naye
, kuti vave kuti akasungirirwa nemweya naye, chii pfungwa kwamuri kuita?
? mweya naye
mweya naye asiri mumwe munhu ari munhu akavaka ukama zvakadzama muupenyu hwekare, ndiyewo munhu anenge akasaina neimwe nguva chakaoma chisungo uyewo apo kuchinja ukama. The ukama zvakare kuwedzera vaviri kwaizove mhuri kana shamwari yepedyo, aikwikwidza. Nokuda kwechikonzero ichi, mweya naye hachisi chimwe munhu. Zviri sei hapana munhu anogona kusangana kana zvino upenyu.
? mweya naye kubata Aura tinosangana
kana kusangana dzimwe nguva mweya naye anonzi nguva nzira yavo youpenyu rava yakanaka uye akasimba. Somuenzaniso, ndakawana mubayiro, dzakadai basa uye mabasa aunofarira, akadai akasvika kupikisa nenzira yakasiyana fashoni uye kusvikira zvino, ndiyo nguva iyo wakabva chinhu simba mukati pachako. Ngatitaurei kubata kuitira kuti vasarasikirwe chinoita semhanza yakadaro.
mweya naye kuziva kuti zvikuru chokuita _-nemumwe ari ukama hunokura nemumwe Bwinyisai mweya nomumwe. Kana ndakasangana nevanhu sokuti mweya naye, ngationei kuti akabatanidza vanhu uye mupfungwa zvikuru. An kumikidzo ukama zvokunamata kupfuura muviri ukama, uye kupfeka pfungwa kupanana simba mumwe mumwe, unogona zvakare kudzamisa zvisungo.
? Kana wasangana ne nokungwarira
mweya naye uyo akaonekwa yokuchinja, zvinonzi pane dzakawanda apo vakamira kuchinja upenyu hwangu kuti I kufamba. Panguva iyoyo kana chikwereti simba kuti, munhu anenge kana yakabikwa mukana dzichinje zvinooneka nzira kufamba kubva zvino, kuitira kuti kweropa ukama zvikuru pakunamata, nokuti pane muenzaniso dzakawanda kuramba tichifamba pamwe refu kuroorwa hazvina. Kana rinowanika munhu rakachinja upenyu hwangu, tapota uchikoshesa ukama.
ari nguva dzose zvakanaka simba yakazara tangi kuti kuchengeta
soulmate, nguva zhinji kubva kare upenyu uye yapfuura ishamwari kuti kwave kakawanda kusangana, ndiye ukama pakati mumwe ari zvakasimba nokukwezvwa mweya. Zvisinei, kana usiri mumamiriro ezvinhu kuti vaswedere simba mweya zvakakwana, zviri kuti anokumhan'arira mweya hausi kukwanisa kubata yavo.
Naizvozvo, zvinova nguva dzose zvakanaka muupenyu hwezuva nezuva, zvingava zvinokosha kukwezva mweya naye kuchengeta simba rakazara.
Pamunosangana x000D_ mweya mudzimai, zvinonzi pane dzakawanda apo vakamira kuchinja upenyu hwangu kuti I kufamba. Panguva iyoyo kana chikwereti simba kuti, munhu anenge kana yakabikwa mukana dzichinje zvinooneka nzira kufamba kubva zvino, kuitira kuti kweropa ukama zvikuru pakunamata, nokuti pane muenzaniso dzakawanda kuramba tichifamba pamwe refu kuroorwa hazvina. Kana rinowanika munhu rakachinja upenyu hwangu, tapota uchikoshesa ukama.